Monster-Con horror convention scares up fiendish fun - ExpressNews.com
René A. Guzman Sep. 25, 2018 Updated: Sep. 25, 2018 7:38 p.m.
1of77“Sleepaway Camp” star Felissa Rose will attend this year’s Monster-Con.Photo: Bobby Bank /Getty Images
2of77The annual Monster-Con free horror convention at Wonderland of the Americas mall welcomes all ages for a pre-Halloween fright fest. Monster-Con 2018 runs Sept. 29 and 30.Photo: Courtesy Monster-Con
3of77The all-ages Monster-Con encourages all ages to dress up as their favorite characters, horror or otherwise.Photo: Courtesy Monster-Con
4of77Monster-Con 2018 will feature numerous artists and vendors, including San Antonio fantasy and horror illustrator, Alfredo "Freddy" Lopez Jr.Photo: Courtesy Monster-Con
5of77Monster-Con 2018 will feature more than 100 vendors, hawking all sorts of horror-themed collectibles and other geeky wares.Photo: Courtesy Monster-Con
6of77Monster-Con 2018 will host a special Terror Tots costume contest for kids.Photo: Courtesy Monster-Con
7of77Monster-Con 2018 also will host a female-only Scream Queen costume beauty pageant.Photo: Courtesy Monster-Con
8of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
9of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
10of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
11of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
12of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
13of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
14of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
15of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
16of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
17of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
18of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
19of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
20of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
21of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
22of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
23of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
24of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
25of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
26of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
27of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
28of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
29of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
30of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
31of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
32of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
33of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
34of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
35of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
36of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
37of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
38of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
39of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
40of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
41of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
42of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
43of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
44of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
45of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
46of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
47of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
48of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
49of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
50of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
51of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
52of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
53of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
54of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
55of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
56of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
57of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
58of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
59of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
60of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
61of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
62of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
63of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
64of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
65of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
66of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
67of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
68of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
69of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
70of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
71of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
72of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
73of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
74of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
75of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
76of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
77of77More than 100 vendors greeted San Antonio horror fans at Monster Con this weekend at Wonderland of the Americas mall. Many showed in costume to show off their gothic tendencies and gruesome looks.Photo: By Chavis Barron and Isaiah Matthews/Solarshot, for mySA.com
RELATED: San Japan casts its magic on San Antonio
RELATED: Bloodlust takes over San Antonio club during uninhibited rave
RELATED: Horror movies and TV shows coming to Netflix in October, just in time for Halloween